Fekitari - Xiamen Jin Weitai Rubber & Plastic Co., Ltd.
Maitiro ekugadzira zvigadzirwa muJWT？
Iwe une mazano, uye isu tine timu yehunyanzvi yekubatsira kushandura mazano ako kuita sampuli yemuviri, Sei? Kunze kwemainjiniya, akanyanya kukosha michina. Ndinoda kukutora iwe kuseri kwechiitiko kuti ushanyire musangano wedu mumwe nemumwe, handei!
Silicone Kusanganisa Musangano
Kazhinji, iyi ndiyo nhanho yedu yekutanga,
Muchina wekugaya unoshandiswa kusanganisa mhando dzakasiyana dzeSilicone zvinhu zvinoenderana neyakagadzirwa chigadzirwa, semuenzaniso, Colors & Hardness. Chero chero ruvara runogoneka sezvaunoda, Kuoma kubva makumi maviri kusvika makumi masere kumahombekombe A kunoenderana nezvaunoda.
Rabha Vulcanization Kuumbwa
Kuumba workshop vane 18 rinovira vulcanization Kuumbwa muchina (200-300T).
Iri ndiro danho rakakomba kwazvo rekushandura iyo Silicone Chinyorwa kuita iyo zvigadzirwa zvigadzirwa chimiro. Inogona kuburitsa yakaoma & dzakasiyana chimiro zvikamu zvinoenderana nemufananidzo wevatengi, kwete chete kuumba Silicone kana Rubber zvinhu, Unogona zvakare kusanganisa Plastiki kana Simbi neSilicone, chero dhizaini inogoneka.
LSR (Liquid SIlicone Rubber) richigadzirisa Machine
Liquid silicone Kuumbwa muchina kunogona kuburitsa yakakwira chaiyo silicone zvigadzirwa. Chigadzirwa chinogona kudzorwa mukati me0.05mm. Silicone zvinhu kubva mudhirairi kuforoma haina kupindira kwevanhu kuti ive nechokwadi chekuti kugadzirwa kwese hakuna kusvibiswa.
Muchina unogona kuburitsa zvigadzirwa zvinoshandiswa mune yekurapa, zvemagetsi uye yekugezera chigadzirwa indasitiri.
Jekiseni Kuumbwa inoshandiswa kuburitsa epurasitiki zvigadzirwa.
Tine gumi seti jekiseni Kuumbwa muchina ine otomatiki yekudyisa sisitimu & yemuchina ruoko, inogona kupa zvinhu & kutora yakapera chigadzirwa otomatiki. Machine muchina kubva 90T kusvika 330T.
Mwaya kupenda workshop yekuchenesa kamuri.
Mushure mekusaswa, zvigadzirwa zvacho zvaizove mu18m IR mutsara wakanangana nekubheka, mushure meizvozvo chigadzirwa chapera chigadzirwa.
Laser Etching Wekishopu
Screen yekudhinda inzira yekudhinda uko mesh inoshandiswa kuendesa inki kune substrate, kunze kwenzvimbo dzakagadzirwa dzisingapindike neingi neyakavhara stencil. Blade kana squeegee inofambiswa mukati mechidzitiro kuti izadze yakavhurika mesh apertures neingi, uye yekudzosera sitiroko iyo inokonzeresa iyo skrini kuti ibate substrate kwechinguva padiki pamutsetse wekutaurirana.
Screen Kudhinda Workshop
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti silicone yerabha keypads kazhinji laser etched yekumisikidza mhedzisiro yekudzosera kumashure. Iine laser etching, yakakwira-inofambiswa laser inoshandiswa kusarudza kusungunuka uye kubvisa pendi kubva kune chaiwo nzvimbo dzepamusoro rukoko. Kana pendi yabviswa, kuvhenekerwa kwemwenje kunovhenekera keypad munzvimbo iyoyo.
Kwayedza ndicho chinhu chakakosha kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu zviri mukujekesa & kusangana nezvinodiwa nevatengi, isu tichaedza mbishi zvigadzirwa, yekutanga chakuvhuvhu chigadzirwa, yepakati-maitiro & yekupedzisira maitiro zvigadzirwa mukati meIQC, IPQC, OQC.
Bass Radiator, Radiator Rubber Isolators, Diki Aluminium Led Radieta, Passive Radieta, Passive Bass Radieta, Radiator Rubber Gomo,